Nooca cusub ee Duolingo wuxuu si fiican ugu habboon yahay xayawaankaaga | Abuurista khadka tooska ah
La Maskaxda guumaysta ee Duolingo waa dhiirrigelin ilaha cusub ee awood u leh inay soo qabato shakhsiyadeeda, sidaas darteedna u geyso xusuustaas iyo xayeysiintaas wixii hadda ka dambeeya waxaan ku arki doonnaa wadiiqooyinkeeda kala duwan.
Duolingo waa barnaamij barasho luqadeed oo mahadcelinta barashada ciyaarta darteed ay astaan ​​ugu noqotay malaayiin dad ah oo adduunka ku nool. "Gamification"-keeda ayaa ogolaaday luqadaha qalafsan waxaa lagu baran karaa dadaal yar.
Waa Johnson Banks iyo Fontsmith oo shaqeeyey wada jir si ay u abuuraan font u gaar ah oo loo yaqaan baal geesinimo. Moodhadh u dhashay madadaalo oo soo jiitay dareenkaas uu Duolingo mascotkiisa, guumaystahiisa, haysto.
Waana taas tijaabooyinka ugu horreeya Bangiyada garatay midabkaas iyo qaabkaas Sawirka Owl wuxuu ku shaqeeyaa cinwaanka cusub, markaa way sii ambaqaadeen inay keenaan oo ay ka dhigaan isha barnaamijkan barashada luqadda.
Caawinta Fontsmith, Bangiyadu waxay awoodeen inay hagaajiyaan astaanta oo ay hagaajiyaan naqshada farta baalka si loogu daro dhibco naqshad aad u kala duwan. Waxaan ka hadlaynaa soo bixitaanka toosan oo ku meeraysan «g» taasna waxay tilmaamaysaa qodobkaas qurxoon ee mascot-ka Duolingo.
Qalooc aan arki karno xarfaha qaarkood sida "d" ama "l". Muuqaal aad rabto inaad sheegto oo aad isku xirto isticmaalaha barnaamijyadaada. Oo haddaan jaleecno sida qoristaas ay ugu egtahay qaab-hawleedkaaga, runta ayaa ah inay u muuqato mid wanaagsan.
Hab dhakhso leh oo tilmaam ah sida farta qoraalka ay u adeegsan karto astaan ​​ahaan sumadda oo markaa tilmaamaysa qodobbada ugu astaamaha badan ee adeegga lagu barto afafka. Wax la mid ah waxa ay sameeyeen IKEA oo leh far gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Duolingo Wuxuu Soo Bandhigay Font Cusub Oo Si Buuxda U Qabanaya Shakhsiyaddaada